The Gardener: သီချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ နယ်နိမိတ်ကိုကျော်လွန်ခြင်း ....
သီချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ နယ်နိမိတ်ကိုကျော်လွန်ခြင်း ....
အံ့ဖွယ် မင်္ဂလာ (Amazing Grace) ဆိုတဲ့ သီချင်းကိုဒီနေ့ဆိုဖြစ်ပါတယ် ....။
စိတ်နဲ့ဆိုခဲ့လို့ အသံမပါလာခဲ့ပေမယ့် .....
စိတ်နဲ့ကြားခဲ့တာတွေကို ပြန်ဝေငှလိုက်ပါတယ် ...။
၁၇၆၀ နဲ့ ၁၇၇၀ ကြားမှာ ဒီ(ခရစ်ယာန်)ဓမ္မသီချင်းကို ဂျွန်နယူတန် ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ် ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကရေးခဲ့ပါတယ် ...(ပရိုတက်စတင့်လို့ထင်ပါတယ် ...။)။ ဒီသီချင်းဟာ ထာဝရဘုရားရဲ့ ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်း နဲ့ သူ့ရဲ့ အပြစ်တွေများခဲ့တဲ့ အတိတ် ရဲ့ တစ်စိတ်တဒေသ ကို ဖော်ညွှန်းပါတယ် ...။
သူ့ဘ၀ရဲ့ အစောပိုင်းနှစ်သုံးဆယ်မှာ .. နယူတန်ဟာ ... လုံးဝ မပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ ..စိတ်အမြဲပျက်နေတဲ့ သာမန်လူတစ်ယောက် ... တစ်နည်းအားဖြင့် သီချင်းထဲမှာ သူသုံးလိုက်တဲ့ ..."၀မ်းနည်းခြင်းစားသုံးကောင်"။
ကလေးဘ၀မှာ သူက ရန်လိုတဲ့ ... ပြဿနာကောင်လေး...။ လူငယ်ဘ၀မှာ ... ခက်ထန်ရိုင်းစိုင်း၊ အရက် အလွန်အကျွံသောက်ပြီး ... အကြမ်းဖက် ဒေါသအမျက်ပြတတ်တဲ့ အမူအကျင့်တွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ် ..။
အသက် နှစ်ဆယ်လောက်မှာ ... ကျွန်ကုန်သွယ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး .. အာဖရိက မှာ အခြေချခဲ့တယ် ...။ ကျွန်တွေကို လိုက်လံဖမ်းဆီးပြီး .. ငွေဝယ်ကျွန်ထုတ်လုပ်မှုကို ခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်သူလုပ်ခဲ့တယ် ...။ (ကံဆိုးတဲ့ ကျွန်တွေဟာ အရောင်းခံကြတယ် ..။ )နောက်ပိုင်းမှာ နယူတန်ဟာ ... ကျွန်လှေကြီးရဲ့ကပ္ပတိန်ဖြစ်လာခဲ့တယ် ...။ သူတို့လှေကြီးဟာ ... ဂရိတ်ဗြိတိန်ကနေ အာဖရိကကိုသွားပြီး ... ကျွန်ကုန်တွေဖြည့်ပြီး ... အမေရိကားမှာသွားရောင်းတယ် ...။(စကားချပ် .. ကိုအောင်သာငယ်တို့ က မှာထားလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ထည့်ရေးပေးပါတဲ့ ...။)
သုံးနှစ်လောက်ကြာတော့ ... ဘုရားက နယူတန်ကို acknowledgement letter ပို့တယ် ...။ သူတို့ရဲ့ ကျွန်လှေကြီးဟာ အင်္ဂလန်ကို အသွား နယူးဖောင်လန်(Newfoundland)အလွန်နား၊ အတ္တလန္တိတ် ပင်လယ်မှာ မုန်တိုင်းအကြီးအကျယ်မိတယ် ...။ သူတို့ဟာ လေပြင်းဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံတွန်းလှန်ရင်း ဘုရားတမိတယ် ..။ (အိုအဘဘုရား ... တပည့်တော်တို့ကို သနားပါတဲ့ ...)။ငယ်ကတည်းက တခါမှ ..ဘုရားကို မတခဲ့တဲ့ နယူတန်ကကြောက်ကြောက်နဲ့လျှောက်အော်ခဲ့တာ .. ဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပဲတဲ့ ...။
ဘုရားတန်ခိုးပြသလို အံ့သြဖွယ်(Miraculouslyကို ဆီလျော်အောင်ပြန်သည် ...။) မုန်တိုင်းကစဲသွားခဲ့တယ် ....။ သင်္ဘောက အိုင်ယာလန်ကို ဘေးကင်းရန်ကင်းရောက်သွားခဲ့တယ် ...။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို နယူတန်ကနောက်ပိုင်းမှာ .. သူတို့ဆုတောင်းပြည့်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တခုလို့ ပြန်လည်ရေးသားခဲ့တယ်...။ ဒါပေမယ့် ခွေးမြီးကောက် နယူတန်လေးဟာ ... ကျွန်တွေကိုတော့ ဆက်ရောင်းနေမြဲပဲ ....။
တချိန်က ငါလမ်းပျောက်ခဲ့တယ် ...
အခု ... ငါလမ်းပြန်တွေ့ပြီ...
သူဟာ ကျွန်ကုန်ကူးမှုကို ၁၇၅၄ မှာစွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ် ...။ သူမှားယွင်းတယ်လို့ နားလည်စပြုလာပါပြီ လို့ထင်ရင်မှားသွားပါလိမ့်မယ် ... သူနေမကောင်းတာရယ် .. မိန်းမနဲ့ သမီးရှိတဲ့ အင်္ဂလန်ကို ခွဲနေရတာကို မနှစ်သက်လို့အနားယူခဲ့တာပါ ...။ သူဟာ အကောက်ခွန်ရုံးမှာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ .. ဘုန်းကြီးဝတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ...။ ရဟန်းစာပေလေ့လာပြီး အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ်မှာ ရဟန်းသိက္ခာခံယူခဲ့ပါတယ် ...။ Olney (အော်လ်နီ ... (အသံထွက်မှားလျှင် အသံထွက်ပြသော အမေရိကန်စစ်စစ်ဆိုသူကိုသာ အပြစ်တင်ကြပါရန် :P).....။ မြို့က ဘုရားကျောင်းလေးတစ်ခုမှာကျောင်းထိုင်ပါတယ် ..။
အဲဒီမှာ .. သူဟာ စိတ်ဝေဒနာရှိနေတဲ့ ကဗျာဆရာ (a mentally ill poet ) William Cowper နဲ့အတူ သီချင်းတွေမြောက်များစွာ ဖွဲ့ပြီး ဘုရားသခင်ရဲ့ မေတ္တာကို ညွှန်းဆိုပြသကြပါတယ် ...။ နောက်ဆုံးမှာ .. အောလ်နီ ဓမ္မတေးပေါင်းချုပ်ဆိုပြီး သီချင်းရာနဲ့ချီ သီကုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ...။ Amazing Grace ဟာ အဲဒီ အောလ်နီ ဓမ္မတေးတွေထဲက တစ်ပုဒ်ပါ ...။
ဘုန်းကြီးသာဖြစ်လာတယ် .. နယူတန်လေးဟာ ကျွန်ကုန်ကူးတာကို ရှက်ဖွယ် အကုသိုလ် အလုပ်လို့သိဖို့ကြတော့ တော်တော်လေးကြာခဲ့တယ် ... သူ့ဘ၀ရဲ့နှောင်းပိုင်းမှာ .. သူ့မိန်းမဆုံးပြီး သမီးလည်း အသည်းအသန်ဖြစ်ကာမှ ... ဒါဟာ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အတိတ်လုပ်ရပ် အတွက် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရတာပဲလို့ သိမြင်လာခဲ့တယ် ...။
နောက်ဆုံးမှာ သူဟာ ကျွန်ကုန်သွယ်မှုဟာ .. ကျင့်ဝတ်နဲ့မလျော်တဲ့ ဥပဒေမဲ့မှုသက်သက်လို့ လက်ခံစွဲမှတ်ခဲ့ပြီး .. အင်္ဂလန်မှာ ကျွန်စနစ်ပပျောက်ရေး ... (abolition) အတွက် အချိန်ပေးပြီး တိုက်ပွဲဝင် ငြင်းခုန်ခဲ့တယ် ..။ လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ လူအများစုကို သူ့ အယူအဆကို လက်ခံအောင် သိမ်းသွင်းစည်းရုံးနိုင်ခဲ့တယ် ..။
နယူတန်ဟာ အသက် ၈၂ နှစ်အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ် ...။ သူသေပြီး နောက်ထပ် ၁၂ အကြာမှာ သူ့နိုင်ငံမှာ ကျွန်စနစ်ဖျက်သိမ်းတဲ့ ဥပဒေထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ...။ သူဟာ ကျွန်ကုန်သွယ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက် အမြောက်အများကိုစုစည်းတင်ပြခဲ့ပါတယ် ..။ သူရေးသားတဲ့ အာဖရိက ကျွန်ကုန်သွယ်မှု အမြင်("Thoughts Upon the African Slave Trade" )ဆိုတဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်နဲ့ အတူ တခြားသော အတ္တုပ္ပတ္တိတွေ .၊ဂျာနယ်တွေ ၊ အထောက်အထားအမှတ်အသားတွေ ..၊အဲဒီ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေဟာအခုခေတ် သမိုင်းလေ့လာသူတွေအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အထောက်အထားရင်းမြစ်တွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ...။
ဒီ Amazing Grace သီချင်းရဲ့ သံစဉ်ကို ... ပရိုတက်စတင့် ဓမ္မသီချင်း နိုင်ငံတော်ဟောင်း (old country) ရဲ့ အလိုက်ကို ယူထားတာလို့ဆိုပါတယ် ...။
ဒီဓမ္မသီချင်းကို ၂၀ ရာစု အစောပိုင်းတွေမှာ .. ဘုရားကျောင်းတွေမှာ သီဆိုရုံသာမက ... အမေရိကန်ကျေးလက်ဒေသတွေနဲ့ .. အကျဉ်းထောင်တွေမှာပါမကျန်သီဆိုကြပါတယ် ...။
၁၉၆၀ မှာ folk ဂီတ ခေတ်စားလာတော့ "Amazing Grace" ဟာ ...folk ဂီတ အမျိုးအစားထဲကို ၀င်ရောက်လာခဲ့ပါတယ် ..။ Judy Collins ဆိုတဲ့ အဆိုတော်ဟာ ဒီ သီချင်းကိုဆိုခဲ့ပြီး .. သူ့အခွေဟာ ရောင်းအကောင်းဆုံး သီချင်းခွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ...။ သန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေဟာ ဒီသီချင်းကိုကြားရတော့ .. ကြားကြားချင်းနှစ်သက်ကြ၊ လေ့လာကြ၊ သီဆိုကြပါတယ် ..။ သီချင်းစာသားတွေက ရိုးသားပြီး ရှင်းလင်းလွယ်ကူပါတယ် ...။ အလွယ်တကူ ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပါတယ် ...။ သီချင်းလေးရဲ့ ပထမ အစပိုင်းလေးကြားလိုက်တာနဲ့ လူတွေဟာ ... သီချင်းကိုတန်းသိနေတော့တာပါပဲ ...။
မြို့ပြ အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှု အရှိန်အဟုန်ကောင်းလာတဲ့ အချိန်မှာ .. ဒီသီချင်းဟာ လှုပ်ရှားမှုရဲ့ အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ..။ နိုင်ငံနဲ့ အ၀ှမ်းမှာပြုလုပ်တဲ့ .. အခမ်းအနားတွေ .. စုဝေးပွဲတွေမှာ ဒီသီချင်းကိုဆိုခဲ့ကြပါတယ် ...။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့ ၊ ၁၉၉၀ မှာ (၁၂ နာရီ) ရော့ခ်ဖျော်ဖြေပွဲတခုကျဉ်းပခဲ့ပါတယ် ...။ နယ်လ်ဆန် မန်ဒဲလား(Nelson Mandela) ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ပွဲပါ ...။ ရာနဲ့ချီတဲ့ နာမည်ကျော်တွေဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ် ..။
အဲဒီမှာ .. အော်ပရာ အဆိုတော် Jessye Norman က "Amazing Grace" ကိုသီဆိုခဲ့ပါတယ် ..။ ဂီတပွဲလာရောက်သူတွေက တခဲနက်အားပေးခဲ့ကြတယ် ..။
1989 မှာ .. လူထုအသံလွှင့်စနစ် စတင်တဲ့ အခါမှာတော့ ... "Amazing Grace" သီချင်းရဲ့ ဗားရှင်းအမျိုးမျိုး နဲ့ သီဆိုသူတွေ ၂ နာရီကြာ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအစီအစဉ်တစ်ခုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ် ..။
"It gets to the heart of man."
"It allows you to reach down into yourself."
"It isasong of reconciliation...and of hope."
"It helps you to seeabetter day."
"It makesadifference in your life."
"While you are singing it, you are free!"
"It's more thanasong."
"It is the pearl of spiritual songs."
နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်အတွင်း သီးချင်းဟာ အများကြီးပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီ ...။ အချိန်နဲ့ အမျှ သံစဉ်ရော စာသားပါ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပါတယ် ...။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးအသီးသီးရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့အညီပြောင်းလဲလာပါတယ် ...။ ဒီလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတာကိုကလည်း သီချင်းကိုပိုပြီး အသက်ဝင်စေပါတယ် ...။ အခုတော့ ဒီသီချင်းဟာ အလွန့်အလွန်ကို လူသိများတဲ့ သီချင်းတပုဒ်ဖြစ်နေပါပြီ ...။ (Elvis Presley ဆိုသွားလို့ဖြစ်မယ် )
၁၉၉၆ မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ... ဂီတပညာအမျိုးသား ကွန်ဖရင့်မှာ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတိုင်း နိုင်ငံ့ယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့ သီဆိုသင့်တဲ့ သီချင်းစာရင်းကို စုစည်းတဲ့ အခါ Amazing Grace သီချင်းကိုပါထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ် ...။
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဓမ္မသီချင်းတွေထဲမှာ ... Amazing Grace အသိအမှတ်အပြုခံရဆုံး၊ မှတ်တမ်းအတင်ခံရဆုံးသီချင်းတပုဒ်အဖြစ် ... ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲပါပဲ ...။
Amazing Grace--More Than A Hymn
...သီချင်းကို အစပြန်ဖော်ပေးလို့ အမတော်အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း...။
Our Love (Healing Poem)